लोडसेडिङ घटाउन चीनको यस्तो प्रस्ताब, निर्णय ओलीको हातमा –
काठमाडौं, १३ फागुन । छिमेकि राष्ट्र चीनले नेपाललाई विद्युत संजालमा जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस अघि नेपाललाई दक्षिण एसियाली रेलमार्ग र विश्व बैंकमा समेत समेटेको चीनले विद्युत संजालमा समेत जोड्ने
दुर्घटनाग्रस्त नयाँ विमानः क्यानडामा बनेको अत्याधुनिक !
१२ फागुन, काठमाडौं । बुधबार बेपत्ता भएको कल साइन ढल्-ब्ज्ज् विमान तारा एयरले गत असोज ९ गते नेपाल ल्याएको थियो । भाइकिङ डिएचसी ६-४०० सिरिजको यो ट्वीनअटर विमान उत्तर अमेरिकी
बिदेशमा अलपत्र परे सिधै नेपाल प्रहरीलाई फोन गर्नुहोस् – भिडियो सहित
काठमाडौं ११ फागुन, मानव बेचबिखनमा परि विदेशमा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई उद्दार गर्ने उद्देश्यले महानगरीय अपराध महाशाखा हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ | नेपाल दुरसञ्चार कम्पनिसंगको सहकार्यमा महाशाखाले मानव बेचबिखन तथा
तपाईंले आफ्नो घरमा रहेको सिलिण्डर आयुबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?
संसारका हरेक वस्तुको निश्चित आयु हुन्छ । कुनैको लामो आयु हुन्छ भने कुनैको छोटो । भन्ने गरिन्छ– ब्रह्माण्डकै पनि निश्चित आयु छ । तर, तपाईंले आफ्नो घरमा रहेको खाना पकाउने
चीनले राख्यो यस्तो प्रस्ताब,नेपालले स्वीकारे भारतबाट एक वाट विजुली ल्याउन नपर्ने
विश्वकै शक्तिशाली तथा आर्थिक विकासको प्रमुख राष्ट्र चीनले नेपाललाई जलविद्युत विकासको प्रस्ताव गरेको हो । भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले ६ महिना होइन् तीन महिनामै ६
सुनको भाउ फेरी बढ्यो ,आज को रेट कति ?
साताको पहिलो दिन देखि स्थिर रहेको सुनको भाउ मङ्गलबार भने २ सयले उकालो लागेको छ । मङ्गलबार सुनको भाउ बढेसँगै सुन प्रतितोला ५५ हजार ७ सय रुपैया निर्धारण भएको
फेसबुक म्यासेन्जरमा अायो खास सुविधा, कसरी प्रयोग गर्ने?
फेसबुक म्यासेन्जरले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुका लागि नयाँ फिचर ल्याएको छ।कम्पनीले एन्ड्रोइड फोनका लागि म्यासेन्जर एपको अपडेट गरिएको नयाँ संस्करण पेश गरेको छ। यो नयाँ संस्करणमा फेसबुकले एक विशेष फिचर ल्याएको छ।
एप्पलले आफ्नो नयाँ आईफोन सान फ्रान्सिस्कोमा चाडै सार्वजनिक गर्दैछ। यो नयाँ आईफोनको नाम आईफोन ६एस वा आईफोन ७ हुनेछ। नयाँ आईफोन लञ्च हुनैलाग्दा पुराना आईफोनको मूल्यमा पनि केही कमी आउनेछ।